Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): The Journalists Who Died Doing Their Jobs in 2014
at 1/03/2015 11:22:00 AM
ကမ္ဘာကျော် Newsweek ဂျာနယ်ကြီးရဲ့၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်သစ်မှာ ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့အထဲမှာ ပါတဲ့ “The Journalists Who Died Doing Their Jobs in 2014” အထူးကဏ္ဍမှာ ကမ္ဘာတစ်လွှားက သတင်းထောက်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေရင်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြရတဲ့ သတင်းထောက်များထဲမှာ မြန်မာပြည်မှ ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီးရဲ့အကြောင်း ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
ယခုထက်ထိ အာဏာရှင် သိန်းစိန်အစိုးရဟာ ကိုပါကြီးရဲ့ကိစ္စကို အလေးမထားဘဲ၊ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘဲ၊ အချိန်ဆွဲကာ ကလိမ်ကကျစ်ကျကျ အမှုကို လိမ်လည်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။
Aung Kyaw Naing, also known as Par Gyi, wasaBurmese freelance journalist and political activist from Rangoon working along the Burma-Thai border. His work appeared in many local Burmese media outlets such as The Voice, Eleven Media and Yangon Times. He was detained and killed by Burmese military while covering armed clashes between the Burmese army and Karen ethnic rebels. Activists and supporters protested the killing of Naing and called for an inquiry into his death, his wife saying she believed he was tortured while in military custody. The Myanmar National Human Rights Commission reported multiple injuries to his body, including several gunshot wounds, discovered after after his body was exhumed in November. —Tzirel Kaminetzky.